Articles In Somali – SOMTA | Somali Tourism Association,Somali Hotels,Somali Restaurants,Somali Tourisms
Articles In Somali
Haddii aan si gaar ah aan u milicsano jewiga waa xilli xagaayo oo roob mahigaan ah ayaa Alle magaalada ugu nimceeyey. Jawi waa mid deggan oo qabowga awgiis oogada u muhaneyso. In kastoo roobabka dhaliyeen daadad hakiyey isku socodka gaadiidka ayaa waxaad arkeysaa in waddooyinka isku xiro xaafadaha Muqdishu ay weli gaadiidku soconayaa .
Waxyaabaha aan aad ugua jecleystay Muqdisho waxaa ka mid ah: dhallinta yar-yar ee qurbaha ku dhashay oo intooda badan aad ku arkeysid badda Liido iyagoo gabdho iyo wiilal leh oo ku dabaal- joogteynayaan hirarka nadiifka ah ee badda Badweynta Hindiya. In dhallinto booqdaan meelaha dalxiiska loo tago,waxaa ugu wacan shirkado aqoon u leh dalxiisaka sida (Somali Tourism Association (SOMTA) oo si sahllan ugu adeegta dadka daneynaya dalxiiska. Waxay shirkaddu kaashataa ardada Jaamicadaha si ay sare ugu qaado niyaddooda. Waxayna taa wax weyn ka tareysaa in ay xirfado u noqdaan markay waxbarashadooda dhameystaan.
By Webmaster|2014-04-17T11:47:39+00:00March 24th, 2013|simple|0 Comments